ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်များ – Dhamma School Foundation (Baho)
( ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် )
ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော် သမဏအာဇာနည် ဘဒ္ဒန္တသိရီကဥ္စနာဘိဝံသ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း
ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်း (ဗဟို) ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော် သမဏအာဇာနည် ဘဒ္ဒန္တသိရီကဥ္စနာဘိဝံသ (ဒွိပိဋကဓရ၊ ပိဋကကတ္ထပါဠိပါရဂူ) ကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ နတ်မော်မြို့နယ်၊ ထန်းပင်ကုန်းကြီးရွာနေ ခမည်းတော် ဦးရွှေမန်း + မယ်တော် ဒေါ်တင်မြ တို့မှ ၁၃၂၄ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် (၇) ရက်၊ ၁၅. ၂. ၁၉၆၃ (သောကြာနေ့) တွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
(ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် )
ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဥတ္တရ၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း
ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်း (ဗဟို) ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဥတ္တရကို ခမည်းတော် ဦးရေချမ်း + မယ်တော် ဒေါ်မြသွေးတို့မှ ၁၃၂၅ ခုနှစ်၊ နတ္တော်လဆန်း (၉) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီမြို့၊ ဝမ်းနာရွာတွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
( အတွင်းရေးမှူး (၁) ဆရာတော် )
ဒေါက်တာ အရှင်ဉာဏဝံသ၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း
ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်း (ဗဟို) ၏ အတွင်းရေးမှူး (၁) ဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဉာဏဝံသကို ခမည်းတော် ဦးအောင်ခင် + မယ်တော် ဒေါ်သန်းပုတို့မှ ၁၃၃၈ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် (၅) ရက်၊ (၈. ၃. ၁၉၇၇) အင်္ဂါနေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ နနွင်းတောရွာတွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
( အတွင်းရေးမှူး (၂) ဆရာတော် )
( အတွင်းရေးမှူး (၃) ဆရာတော် )
ဒေါက်တာ အရှင်ကိတ္တိသာရ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း
အရှင်ကိတ္တိသာရ ကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဘုတလင်မြို့နယ်၊ ညောင်ကန်ကျေးရွာ ဦးထွန်း + ဒေါ်ဌေး တို့မှ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၄၅ ခု၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် (၁၅) ရက် (၈-၈-၁၉၈၃) တနင်္လာနေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။